नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : भारत आफ्नो देशका कम्युनिस्ट खेद्छ, नेपालका कम्युनिस्ट बोक्छ ! लेनिनका झण्डै ५ सय भन्दा बढी शालिकहरु यसरी ढालिए !
भारत आफ्नो देशका कम्युनिस्ट खेद्छ, नेपालका कम्युनिस्ट बोक्छ ! लेनिनका झण्डै ५ सय भन्दा बढी शालिकहरु यसरी ढालिए !
बीसौँ शताब्दीका प्रभावशाली व्यक्तित्वमध्येका एक भ्लादिमिर लेनिनको मृत्यु भैसके पनि उनको विचारधारलाई धेरैलाई प्रभाव पारेको छ । सन् १९९१ मा सोभियत संघ नढल्दासम्म लेनिनको विचारधाराको प्रभाव निकै नै थियो । लेनिनका समर्थकले उनलाई समाजवादी नेताका रुपमा हेर्छन भने आलोचकले भने एक तानाशाहका रुपमा । ठूलो परिमाणमा भएको राजनीतिक अत्याचार र हत्यामा उनलाई दोषी ठहराउनेहरु
यस्तो भनिन्छ कि यदि तपाईँ कुनै देशका बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ कस्तौ प्रतिक बनाइयो भन्दा पनि कस्तो प्रतिक हटाइयो भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । उज्यालोका अनुसार यही कुरा भारतको त्रिपुरा राज्यमा पनि लागू हुन्छ । जहाँ २५ वर्षदेखिको वाम किल्ला तोडेर बीजेपीले सरकार बनाएको छ ।
Posted by www.Nepalmother.com at 7:14 AM